Thursday,6Dec, 2018 3:40 PM
धनगढी । कैलाली जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा विनियोजित विकास निर्माणमा चरम भ्रष्टाचार भएको तथ्य फेला परेको छ । गाउँपालिकाका ७ वटै वडाका लागि विनियोजित कार्यालय सञ्चालनका लागि छुट्याइएको रकम, सवारी साधन खरिद, कार्यालय भाडा, सडक निर्माणदेखि लिएर विद्यालय भवन, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा विनियोजित बजेट विकासमा भन्दा पनि किर्ते बिल बनाएर आधा रकम प्रयोग गर्दैआधा जति रकम झ्वाम पारिएको छ ।
मोहन्याल गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ७ वटै वडा कार्यालयहरुलाई दामाशायीका हिसावले एकमुष्ठ बजेट छुट्याए पछि वडा अध्यक्षहरुले आसेपासेलाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बनाएर रकम व्यापक दुरुपयोग गरेको गुनासा सुनिन थालेका छन ।
अधिकांश वडाहरु चुरे क्षेत्रमा पर्दछन । चुरेमा हेभी इक्युभमेन्टको प्रयोग गर्न बन्देज भएपनि डोजरहरु मनोमानि रुपमा प्रयोग गरि वडा अध्यक्षहरुले कमिशन खाएर रकम हिनामिना गरेको पाईएको छ ।
एक स्थानीयले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा भने डोजर लगाएर बाटो निर्माण गरियो । रकम निकासा गर्दा किर्ते उपभोक्ताका नाममा डोर हाजिर लगाएर रकम भुक्तानी लिइएको छ ।
उनले प्रश्न गरे– बाटो खन्ने डोजर अनि नाम चाहिँ जनताको कसरी लेखियो सरासर त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन ? योजना छनोट गर्दा जनताको भावनालाई नसमेटेर विनियोजन गरिएको बजेटलाई काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि सार्वजनिक सुनुवाइ नगरिकन सोझै बिल पास गर्ने कार्य समेत भएको आरोप स्थानीयको रहेको छ ।
कैलाली जिल्लाको पहाडी चुरे क्षेत्रमा पर्ने मोहन्याल गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा खनिएका सडकहरु वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकननै नगरिकन चुरे क्षेत्रमाथी धावा बोल्ने कार्य भएको छ ।
चुरेमा डोजरको प्रयोग गर्दै वनमाफियाको रकम समातेर सिमली,खनियाताल सडकमा करोडौं मूलयबराबरका हरिया साल,सल्लाका रुखहरु डोजरलगाएर उखेलेरफालिएको भएपनि वन प्रशासनले पनि आँखा चिम्लेर बस्नुले यसमा वन प्रशासन पनिसंलग्न रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
सिमली, खिमडी हुँदै खनियाताल जाने सडक खण्डमा सयौं साल र सल्लाका रुखहरु समेत नासिएका छन । मोहन्याल गाउँपालिकाका प्रत्येक वडा कार्यालयलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि भनेर प्रति वडा कार्यालयलाई छुट्याइएको ७ लाख रुपैयाँ पनि हिनामिना भएको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतले भने साविक पण्डौन र मोहन्याल गाउँपालिकाका १, २ र ४ गरि ३ वटा वडा कार्यालयहरु सुखडमा एउटै घरमा भाडामा रहेका थिए । भने वडा नम्बर ३,६ र ७ क्रमश ः फलेबिसौनी, सोल्टा र कुइनेमा राखिएका थिए ।
ती वडा कार्यालयहरुका भाडा, प्रशासनिक खर्च देखि लिएर फर्निचर खरिद कार्यमा वडा अध्यक्षहरुले मनोमानी ढंगले गरेको र वडा पालिकाका सदस्यहरुलाई समेत कुन शिर्षकमा कति रकम खर्च लाग्यो भन्ने बारेमा समेत जानकारी नदिएको आरोप अधिकाँश वडा सदस्यहरुको रहेको छ ।
नयाँ वडा कार्यालय निर्माण, पर्यटन र सडकका नाममा विनियोजन गरेको रकम सबै वडा कार्यालयहरुमा अपारदर्शी रुपमा खर्च गरि बिल भर्पाई गरिएको आरोप स्थानीयको रहेको छ ।
हरेक विकास निर्माणका शिर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेटमा अनियमितता वाहेक अरु केहि पनि भेटिदैन एक स्थानीयले नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा बताए । उनले भने प्रत्येक योजनाका बिल भर्पाई माग्नुहोस्, आम उपभोक्ताका माझ राखेर छानविन गरौं वडा अध्यक्षहरु र उनका आसेपासे उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसंग जवाफनै भेटिदैन ।
सोझासाझा गाउँका जनताका आँखामा छारो हालेर अधिकाँश वडा अध्यक्षहरुले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको पनि आरोप स्थानीयको रहेको छ । यस सम्बन्धमा मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवल सिंह रावल आफू पूर्णरुपले अनभिज्ञ रहेको बताउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, सबै वडामा एकमुष्ठ बजेट दामासायीका हिसावले वितरण गर्दा अनियमितता भएको गुनासाहरु आफूले पनि सुनेको छुँ ।
आफुले एक रुपैयाँ पनि विकासका लागि भनेर हातमा राखिएन । सबै वडाहरुलाई दामासायीका हिसावले वितरण गर्दा अनियमितता बढेको हो । सबै वडामा भएका विकास निर्माणका बारेमा जनताले जानकारी राख्न पाउनुपर्ने हो आन्तरिक खिचलोका कारण त्यसो हुनसकेको छैन । अध्यक्ष रावल भन्नु हुन्छ– प्रत्येक वडाकोहिसाव किताव जनतालेदेखन रसुन्न पाउनु पर्दछ । नत्र लोकतन्त्रको के अर्थ ?
सो गाउँ पालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत गणेश प्रसाद ओझासंग गाउँपालिकामा भएको विकास निर्माणको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई नगरि बलि कसरी पास भयो ? भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नु भयो — विकास निर्माण सम्पन्न भएको सिफारिस दिने वडा अध्यक्ष देखि लिएर उपभोक्ता समिति जिम्मेवार रहन्छन् ।
टेण्डर प्रकृयामा गएका योजनाको सार्वजनिक सुनुवाई जरुरी छैन, बाँकी उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरेका विकास निर्माणको सार्वजनिक सुनुवाई हुन जरुरी देखिन्छ ।